Umama kunye noMntwana ukuhambelana kweZodiac kwiiTaurus Moms - Ihambelana Astrological Signs
Umama kunye noMntwana ukuhambelana kweZodiac kwiiTaurus Moms
Umama waseTaurus ngumama wendabuko ongacacanga. Uyabathanda abantwana bakhe ngaphandle kwemiqathango kwaye angabanika isiseko esiqinileyo ebomini. Kulula kangakanani okanye kunzima oko kuya kuxhomekeka kwindlela ahambelana ngayo nomnye wabantwana abali-12 be-zodiac kunye nokukwazi kwakhe ukuguqula ubunjani benkani obuzinzileyo ngokufanelekileyo.
UKUYAITaurusUmama ungumama onothando okhuselayo, angafuni nto ngaphandle kwezona zilungileyo kubantwana bakhe kwaye uhlala eyintsika yenkxaso kwimidla yabantwana bakhe. Abantwana bakhe banokuthembela kuye ukuba bavele kwiikonsathi zesikolo, kwimidlalo yeligi encinci, kwimidlalo, okanye nakuwuphi na omnye umsitho. Unemihla ngemihla, kwaye ugcina ishedyuli yakhe yezinto ezinje ngokulala, ixesha lokulala, kunye nexesha lokutya. Ungumama onesineke, ozinzileyo, ozolileyo kwaye onengqiqo, obeka imida, onika uthando olungenamiqathango, kwaye aqinisekise ukuba abantwana bakhe banazo izinto abazifunayo. Uyathantamisa kwindlela aqeqesha ngayo, kodwa xa umama weTaurus esithi 'hayi,' uyatsho. Uzimisele ukukhulisa abantwana bakhe ukuba babe noxanduva, abantu abazithembileyo nabazithembileyo.
bungakanani ubunzima bomyinge weminyaka eli-14 ubudala
Umama kunye noMntwana ukuhambelana kweZodiac kweLeo Moms
Umama kunye noMntwana ukuhambelana kweZodiac kuMama woMhlaza
Umama kunye noMntwana ukuhambelana kweZodiac kwiiLibra Moms
IiAriesabantwana bazimele, banomoya ophakamileyo, banesibindi, kwaye banokhuphiswano, kwaye banako ukuba bangxole, bangakhathali, kwaye babe nobuzaza. Ungumama ozolileyo nozolileyo, kodwa akanguye otyhalayo. Umntwana wokuqala wama-Aries, yenza nje 'indalo idibana nomqobo ongenakoyiswa kumama weTaurus, kwaye uMama udibene nomntwana oya kuvavanya umonde wakhe. Umntwana we-Aries unomsindo okhawulezayo, kodwa umama weTaurus unenkani kwaye akashukumi, xa esithi 'Hayi,' umile. Uyincutshe ekulindeni, kwaye uya kufunda kwasekuqaleni ukuba lo mntwana unyamezele kancinci kwaye kungekudala uza kuphazamiseka kwaye ahambe ngolonwabo kwenye into.
Njengama-ertyisi amabini kwipod, umama weTaurus kunye nomntwana waseTaurus uthanda izinto ezifanayo. Phantse yonke into eza ngokwendalo kumama weTaurus, umntwana weTaurus ufuna. Uyaziqonda iimfuno zeemvakalelo zomntwana wakhe, wabelana ngothando lwakhe lokuthuthuzela kunye nomnqweno wakhe wokuba nezinto ezibonakalayo. Nangona kunjalo, bobabini baneenkani kakhulu; zama ukunyanzela umntwana weTaurus kwinto angafuni ukuyenza, kwaye le ntwana ayizukushukuma. Uyakumba izithende zakhe kwaye angabi nakushukuma njengomama wakhe. Ewe, uMama uya kuphumelela, kodwa iya kuba kukuphumelela okukhathazayo. Umama kufuneka acinge ukuba xa umntwana weTaurus engavumi ukuntywila, kungcono ukumgona, umxelele ukuba uyayiqonda indlela avakalelwa ngayo, kwaye ngokuzolileyo uchaze 'izizathu' zemeko.
Ukonwaba, unamehlo aqaqambileyoIGeminiUmntwana kunokwenzeka ukuba anyikime umhlaba womama waseTaurus. Aba bantwana banesiphepho sisiqhwithi somoya onomdla, olapha, naphaya, nayo yonke indawo. Iishedyuli okanye iinkqubo? Umama usenokuzilibala ezo zinto. Iya kudinisa umama waseTaurus ukugcina umntwana wakhe waseGemini. Umama nomntwana bobabini banobuntu obulungileyo, kwaye oko kukudibanisa, kodwa umama uyacotha kwaye ubuyile umva, ngelixa umntwana wakhe waseGemini ekhawuleza kwaye enengqwalaselo emfutshane. Umama kuzakufuneka anike elinye ixesha lakhe lokuzonwabisa ukuze agcine lo mntwana exakekile kwaye aphume engxakini. Kwicala lokudibanisa, unokuba lilitye lomntwana ngokuthetha naye ngomonde kwaye umnike isikhokelo kunye nolwalathiso aludingayo.
Umama weTaurus kunye nayeUmhlazabobabini abantwana bayaphumelela xa bekhuselekile ngokwasemzimbeni kwaye bekhuselekile ngokwasemoyeni, kunye zombini zingamakhaya asekhaya. Lo ngumdlalo omkhulu womama / womntwana kuba umntwana onomhlaza uya kuhlala eziva ethanda kwaye ekhuselekile, kwaye umama weTaurus uyavuya kuba eziphatha njengomntwana kwaye akazukumnyanzela ukuba azimele ngaphambi kokuba akulungele. Umama ubalasele ngokunika umntwana wakhe onomhlaza lonke ukondla, uthando kunye nokuqinisekiswa akufunayo. Umhlaza Umntwana uya kuziva umama wakhe waseTaurus lizibuko lakhe elikhuselekileyo kwaye uya kuhlala ezinikele kuye.
UKUYALeoUmntwana uya kongeza uyolo lokudlala kubomi bukamama wakhe weTaurus. Ukuhamba ngokulula kukaMama, kunye nokuziphatha okuhle, kwaye umntwana kaLeo uzimisele ukukholisa. Ingcali kaMama yokunika umntwana wakhe uLeo ingqalelo, uthando, kunye nendumiso ayonwabileyo kuyo, kwaye uzinzo kunye nokuzinikela akubonisayo kuya kuba sisiseko somntwana. Umama nomntwana bobabini banentliziyo efudumeleyo, banothando kwaye bathembekile komnye. Nangona kunjalo, ayisiyiyo yonke ibhedi yeeroses; njengoko bobabini baneenkani, kuya kubakho ukuma. Umntwana kaLeo unokuba ngumphathi kwaye afune ngenkani, kwaye uMama uza kudweba umgca. Into ebaluleke kakhulu ukuba uMama ayikhumbule kukuba kungcono ukugxeka nokulungisa lo mntwana ngasese kunokuba umbize phambi kwakhe nabani na kwaye wenzakalise ukuzingca kwakhe.
Umama weTaurus ungumntu ozixhamlayo, ohamba ngokulula, kunye nomzali olungileyo, ngelixa aIntombazanaUmntwana uthanda ukuba ngumntu ogciniweyo, ongenabugovu, kunye nokugxeka ngokugqibeleleyo. Aba ngabantwana abaxhalabileyo nabangxolayo abaya kuphumelela kukhathalelo lomama ozinzileyo nozolileyo weTaurus mama. Ungumama onokuthi abaqinisekise ngothando nangokudumisa, ngelixa ebakhokela ngobumnene ukuba baphumle kwaye bangabi naxhala. Into ebaluleke kakhulu ukuba yenziwe ngumama weTaurus kukuzikhupha kancinci kongeze uvuyo, uburharha, kunye noburharha kubomi bomntwana wakhe oneentloni.
Njengomama wakhe weTaurus, aILibraumntwana utsaleleka kwintuthuzelo, ulonwabo kunye nobuhle. Banobubele, bayathandana, bayathetha abantwana abanesidingo sokukholisa abanye. Ngenxa yokuba 'befuna ukuba nobuntu,' abafane baphikisane, balwe, okanye bazincamathele. Ngelixa ukuthanda lo mntwana ukuba afikelele kwabanye kwenza ukuba ngumama kube lula kwaye kumnandi, umama waseTaurus uyaqonda ukuba kufuneka afunde ukuzenzela izigqibo kwaye azimele. Isimo sakhe sokunyaniseka, esingenangqondo kunye nendlela esebenzayo, yokuba phantsi koomama kunokunceda umntwana wakhe waseLibra ekufumaneni ukuzithemba okuyimfuneko ukuze ayeke ukungxola kwaye athethe ngokuzolileyo ngengqondo yakhe ngokukhululekileyo nangokunyaniseka.
UKUYAIScorpioUmntwana unzima kwaye unzima njengoko umama wakhe waseTaurus engenakunzima kwaye enesimo esihle. Aba bantwana bazalwa bekrokrela kwaye kufuneka bafunde ukuthembela, kwaye uthando lomama waseTaurus, olukhuselayo, oluzinzileyo, kunye nolungaguquguqukiyo lokuba ngumama kuya kubenza bathembele kuye. Umntwana weScorpio uya kuzifihla iimvakalelo kunye neemvakalelo zakhe, ke xa bethe cwaka kwaye bethukuthele, uMama kufuneka acinge ukuba kukho into emhluphayo kwaye asebenzise ubumnene, isigulana, nentliziyo yakhe elungileyo ukuba azobe abo bavakalelwa kwaye bathethe ngazo. Eyona nto ibaluleke kakhulu anokwenziwa ngumama weTaurus kumntwana wakhe weScorpio kukumisela ukuthembana kunye nokugcina zonke iindlela zonxibelelwano zivulekile.
UKUYAIsagittariusUmntwana unyanisekile, unentliziyo eyonwabileyo, kwaye usoloko ehamba. Ngokwendalo unamandla, unomdla, kwaye uyangxola, ufuna okungaphezulu ngaphandle kokuba aphume aye kuzula-zula, ngelixa uMama onwabile kuxolo nokuzola kwekhaya. Umntwana we-Sagittarian unengxaki yokuqonda imigaqo, imida, okanye imida, kwaye indalo yakhe inokuvavanya kakhulu umonde womama weTaurus. Njengononophelo njengomama weTaurus, ngaba unomsindo. Kodwa endaweni yokuphulukana nayo, uya kuba ngobukrelekrele exelele umntwana wakhe ngokuzolileyo ukuba kutheni efuna ukuba aziphathe kakuhle, achaze imigaqo ekubonakala ngathi akaqondi, kwaye anike ukuqonda ukuba kutheni kubalulekile.
Umama weTaurus kunye nayeCapricornumntwana abelana ngendlela eyomeleleyo nesebenzayo ebomini. Nangona kunjalo, uMama uthanda ngakumbi ukuzonwabisa kunye nokufuna ulonwabo kunomntwana wakhe. Aba bantwana banoxanduva banokuqonda, bodwa kwaye baneentloni. Abayi kugxininisa kumama wabo 'oqhelekileyo' kunye ne-antics ephambeneyo okanye isenzo esingxamisekileyo. Abantwana baseCapricorn ngabantwana abanothando abaziva ukuba kufuneka bafumane uthando lukamama kwaye baya kusebenza nzima ukuyenza. Banoburharha kodwa abanobuntu obuhle njengonina kwaye banokukhuphisana ngokuqatha. Yonke into uMama ayifunayo kukubabonisa ukuba uyabahlonipha kwaye uyazithanda iinjongo zabo, uyabathanda kwaye uzonwabise, kwaye ubafundise ukuba kulungile ukudlala nokwenza izinto ngolonwabo olukhulu novuyo lwayo.
Umama weTaurus konke malunga nokuthuthuzela kunye nokuqhelana, kwaye nayeU-AquariusUmntwana unomdla ngakumbi kwinto eyahlukileyo nengaqhelekanga. Umntwana ka-Aquarius unomdla wokwaneliseka ngokweemvakalelo, isidingo esendeleyo sokuzimela, kwaye akaphenduli ngokukodwa ekumangeni komama nasekuwangeni. Izenzo zalo mntwana, izimvo, kunye nabahlobo ngamanye amaxesha baya kuba nexhala okanye bamxakekise umama oqhelekileyo weTaurus. Nangona kunjalo, kungcono ukuba uMama anikine intloko ngothando kwaye ayeke lo mntwana enze izinto azithandayo, nokuba zibonakala zingaqhelekanga kangakanani kuye. Umama weTaurus angabonisa uthando lwakhe ngomntwana wakhe wase-Aquarian ngokumamkela nokumkhuthaza ubukrelekrele bakhe obungafaniyo nokumnika inkululeko yokuphonononga ubomi ngendlela yakhe.
Umama weTaurus onobubele kunye nokhuselo kunye noswiti kunye novakalelointlanziUmntwana ubonakala ngathi enzelwe omnye nomnye. Iipisces abantwana banobuthathaka kakhulu kwaye baswele, kodwa umama weTaurus uluthando ngokwendalo kwaye unokunika umntwana wePisces lonke uthando nenkxaso ayifunayo. Utyekele nakukuhlala kwilizwe eliyiphupha elilelakhe. Umama uyabuxabisa ubuchule bakhe bokuyila kwaye uzimisele ukudlala kunye namaxesha ngamaxesha, kodwa ubukho bakhe basemhlabeni bunokumthambisa apha ngoku nangoku. Iipisces zithemba abantwana, abangenangqondo. Umama weTaurus akangomntu otyhalayo, kwaye uya kuqinisekisa ukuba umntwana wakhe wePisces onokubonakala akaweli phantsi kokupela kontanga onengxaki.
rhoxisa ibhedi yokuhlambela nangaphaya komyalelo
Okwangoku umntwana ezelwe, indalo iyahlangabezana nokukhulisa. Abantwana bazalwa beneti yemiyalelo malunga nokondla umntwana; itshathi yabo yokuzalwa ngeenkwenkwezi. Umzali kunye nomntwana ngeenkwenkwezi ukuhambelana kunokukhokela umzali malunga nendlela yokutshintsha ubunjani bakhe ukuze akhulise umntwana wakhe ngendlela eya kuthi ikhuphe uphawu lwelanga elilungileyo kunye nokunye okuninzi.
Malunga Cheerleading Uyilo Lwetattoo Addiction And Recovery Interviews Imisebenzi Imiboniso Yeslides Iingcaciso Zewayini
imibuzo yobundlobongela bosapho yeqela lomsebenzi
I-turkey yebele ye-convection ye-oven yokupheka ixesha lokubala
Umfazi we-leo kunye ne-scorpio yokuhambelana kwendoda
iimoto ezincinci zithengiswa phantsi kwama-500
ngowuphi umfana ofuna usuku lweeValentines
ityuwa kunye neviniga yokubulala ukhula iresiphi uk
marble antique ixabiso itheyibhile ikofu top ixabiso